Handball – CCOI: nanao pao-droa indray ny Reonioney, votso-droa ny Malagasy | NewsMada
Nifarana, ny asabotsy lasa teo, tetsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indiana, taranja Handball. Noraofin-dry zareo Reonioney avokoa ny amboara, teo amin’ny sokajy lahy sy vavy. Votso-droa kosa ny Malagasy, saingy tafiditra ao anatin’ny ekipa telo voalohany.
Tsy mbola tao amin’ny ekipa malagasy ny vintana nandritra ny lalao famaranana nifanandrinan’ny THBC sy ny ekipan’ny Tamponnaise, sokajy vehivavy. Maivana ho an-dry zareo Reonioney ny nandavo ny ekipa malagasy. Nanezaka ihany anefa ny THBC, saingy tsy nahatohitra firy noho ny tsy fananana teknika eny ambony kianja. Hatrany amin’ny 20 minitra voalohany nilalaovana dia efa hita ho tsy nifandanja ny fahaizan’ny roa tonta. Nazava loatra, araka izany, ny fandresena ho an’ny ekipan’ny Tamponnaise ary nolavoiny tamin’ny isa 25 noho 17 ny Malagasy.
Mbola nanjaka ihany koa ry zareo Reonioney tamin’ny lalao famaranana ho an’ny sokajy lehilahy. Lalao nifanandrinan’ny Chateau Morange sy ny ASC Tsingoni avy any Mayotte. Tsy nitovy tamin’ny an’ny vehivavy ny fifandonanana fa tena niady mafy tokoa, teo am-panombohana. Nifandimby nampiditra baolina ny andaniny sy ny ankilany ary tsy nisy nanaiky lembenana. Toy izany hatrany no nitranga tamin’ny ampaham-potoana voalohany. Nanomboka nitaky anefa ny havizanana ho an’ny ekipan’ny Tsingoni, tamin’ny 20 minitra faharoa ka tsy naharesy tosika an-dry zareo Reonioney intsony izy ireo. Nanomboka hita ihany koa ny elanelan’isa teny amin’ny solaitrabe. Tetsy ankilany, manana teknika avo lenta ny ekipan’ny Chateau Morange. Teknika fampiasany hatramin’izay ka izao nibatana ny amboara indroa nisesy izao. Nivoaka ho mpandresy ary voahositra ho tompondaka, sokajy lehilahy, amin’ny fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indiana, taranja handball, araka izany, ny ekipan’ny Chateau Morange. Isa 39 no ho 29 no nandavoany ny ekipan’ny ASC Tsingoni.
Nahomby ny fandraisana
Na dia teo aza ny faharesena ho an’ny Malagasy, nahomby ny fandraisan’i Madagasikara ny fifaninanana eo anivon’ny ranomasimbe Indiana, tamin’ity taona 2018 ity. Afa-po avokoa ireo nosy rahavavy tonga nandray anjara, raha ny nambaran’izy ireo. Raha tsiahivina, efa tamin’ny herintaona no niomanana kanefa noho ny olana nosedrain’i Madagasikara dia tsy tontosa izany raha tsy tamin’ity taona ity. “Nahavita ezaka goavana ny federasiona tamin’ity taom-pilalaovana 2018 ity, porofon’izany ny fahavitan’izao fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indiana izao”, hoy ny fanazavan’ny filohan’ny federasiona malagasy ny handball, Razafintsalama Fidel. “Mbola maro anefa ny ezaka ho atao amin’ny ho avy, indrindra amin’ny fampitomboana ny haavo teknika ny mpilalao malagasy, raha ny fanazavana hatrany. Hisy ny fananganana sekoly ara-panatanjahantena isaky ny faritra ary ho atao laharam-pahamehana amin’io taom-pilalaovana manaraka io izany. “Tsy tokony hatao fialana olana ny tsy fitoviana eo amin’ny vatana sy halavana, rehefa tojo faharesena ny ekipa iray. Ny fitadiavana izay fomba rehetra hahombiazana no tokony himasoana. Izany indrindra no antony hampitomboana ny fampiofanana ho an’ny mpilalao malagasy, amin’ny alalan’ny fanaganana sekoly ara-panatanjahantena”, nanamafy ny filohan’ny FMHB.
Ireo ekipa 3 voalohany:
1-Chateau Morange (REU)
2-ASC Tsingoni (MAY)
3-PC Bouéni (MAY)